Madaxweyne Farmaajo oo Shaaciyey waxa ugu muhiimsan ee ay DF Xooga saari doonto seddexda bil ee soo socoto. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo oo Shaaciyey waxa ugu muhiimsan ee ay DF Xooga saari...
Madaxweyne Farmaajo oo Shaaciyey waxa ugu muhiimsan ee ay DF Xooga saari doonto seddexda bil ee soo socoto.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/llahi Farmaajo oo ka hadlayey banaan bax balaaran oo shalay lagu qabtay garoonka Kubadda cagta Banaadir isla markaana lagu taageerayey howlgalka Xasilinta Caasimadda ayaa sheegay Arinka ay DF xooga saari doonto Seddexda Bil ee soo socoto.
Previous article(Faalo)100-ka maalin maxaa u qabsoomay dawladda Soomaaliya ?
Next articleAfar dawladood oo xiriirka u jaray Qatar